Shiinaha Fiberglass jarjarey Strand Mat emulsion Binders saarayaasha iyo alaabada | Beihai Fiberglass
1.Waxaa laga sameeyaa qaybo kaladuwan oo la jarjarey oo si kalasooc ah loo qaybiyey oo lagu dhejinayo emulsion binder.
2. La jaan qaadi kara UP, VE, EP resins.
E-Glass Emulsion Chopped Strand Mat waxaa laga sameeyaa xargo jarjar ah oo si aan kala sooc lahayn loo qeybiyey oo ay ku dhegan tahay emulsion binder. Waxay ku habboon tahay cusbada UP, VE, EP ballaca duudduuban wuxuu u dhexeeyaa 50mm ilaa 3300mm.
Wet Si wanaagsan oo qoyan u dhex mara oo si dhakhso leh qoyan uga soo baxa weelka, sii deynta hawada ee deg degga ah
Codsiyada ugu dambeeya ee la adeegsado waxaa ka mid ah doonyaha, qalabka qubeyska, qeybaha gawaarida, dhuumaha kiimikada u adkeysanaya kiimikada, taangiyada, munaaradaha qaboojinta iyo qeybaha dhismaha.
Ation Faahfaahin gaar ah ayaa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Mid kasta oo Xadhko Goobeed ah ayaa lagu dhaawacay tuubo warqad ah oo dhexroorkeedu dhan yahay 76mm, rooga duubkuna wuxuu leeyahay dhexroor dhan 275mm. Dulucda gogosha waxaa lagu duubay filim caag ah ， ka dibna waxaa lagu ridayaa sanduuq kartoon ah ama waxaa lagu duubaa warqad gacmeed. Is duubo ayaa si toos ah ama toosan loo dhigi karaa. Gaadiid ahaan, duubka ayaa si toos ah loogu ridi karaa khaanad ama baallooyinka.
Xiga: Toosinta Roving For Pultrusion
Maro adag oo tolmo leh oo xargo leh